जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु - Bulbule Khabar
फागुन २१, सुर्खेत । दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका वडा नं. ८ धरमपोखरा बजारबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी बीरेन्द्रनगर सुर्खेततर्फ जाँदै गरेको जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश ०२–००१ज –०००७ नम्बरको जीप दैलेख र सुर्खेत जिल्लाको सीमानामा पर्ने राउटेगल्छीमा बुधवार विहान दुर्घटना भएको हो । जीपमा सात जना यात्रु मध्ये तीन जनाको मृत्यु भएको छभने अन्य चार जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।
दैलेखका प्रहरी प्रमुख (डीएसपी) हरि बहादुर वलीले मृत्यु हुनेमा सर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने आन्दाजी ५५ बर्षीय देबबहादुर खड्का, बीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १५ का ४५ बर्षीय खड्गबहादुर बुढाथोकी र उहाँकी श्रीमती ४० बर्षीया गोमा बुढाथोकी रहेको जनाउनुभयो ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, फागुन २१, २०७६ 7:55:35 PM
Prevदुर्घटनामा दुईको मृत्यु, आफन्त आक्रोशित, टायर बालेर प्रदर्शन
Nextकोरोना भाइरसबाट जनतालाई जोगाउन कर्णाली प्रदेश सक्षम छ : मन्त्री रावल